भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्यो कोरोना, अब कसरी होला नियन्त्रण ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्यो कोरोना, अब कसरी होला नियन्त्रण ?
५ साउन, काठमाडौं । इण्डियन मेडिकल एसोसिएसन (आईएमए)ले भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको अवस्था निकै खराब रहेको बताएको छ । आईएमएका अनुसार भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको कम्युनिटी ट्रान्समिसनको संकेत देखिएको छ ।
आईएमए हस्पिटल बोर्ड अफ इन्डियाका अध्यक्ष डा. वीके मोङ्गाले एएनआईसँगको कुराकानीमा भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निकै तीव्र गतिमा फैलिएको बताए । भारतमा अहिले दैनिक ३० हजारभन्दा पनि धेरै नयाँ संक्रमित भेटिन थालेका छन् ।
मोङ्गाले भने, ‘मुलुकको लागि यो निकै खराब अवस्था हो । यससँगै जोडिएका धेरै पाटाहरु छन् तर अब यो ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिरहेको छ । यो निकै खराब संकेत हो ।’
मोङ्गाले ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण सरकारको लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी दिल्लीमा त कोरोना भाइरसको रोकथाम गर्न सक्षम छौँ तर महाराष्ट्र, केरल, गोवा र मध्य प्रदेशका सुदूर हिस्सामा के हुन्छ ? राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग मिलेर स्वास्थ्य संकट गहिरिनबाट रोक्नु जरुरी छ ।’
भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने भारतमा कोरोना भाइरसको कम्युनिटी ट्रान्समिसन नभएको बताउँदै आएको छ । केरलका मुख्यमन्त्री पिनरई विजयनले शुक्रबार निरुवनन्तपुरमको केही क्षेत्रमा कम्युनिटी ट्रान्समिसनको शुरुवात भइसकेको बताएका छन् । शनिबार निरुवनन्तपुरमलाई संक्रमण फैलिएको तीन क्षेत्रमा छुट्याएको छ र १० दिनसम्म लकडाउन गरिएको छ ।
मोङ्गाले अब हर्ड इम्युनिटी वा खोप मात्र विकल्प भएको बताएका छन् । खोपको लागि अझै लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसैले अहिले एकपटक संक्रमित भइसकेका मानिसमा देखिएको प्रतिरोधी क्षमता (एन्टबडी) कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । यो क्षमता ६० देखि ७० प्रतिशत मानिसमा विकास भएको खण्डमा त्यसलाई हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ र यो अवस्थामा रोगलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । तर, अहिले तीन महिनाभन्दा लामो समयसम्म विकास भएको एन्टिबडी बसेको भेटिएको छैन ।
मृत्युको मुखमा पुगेर पनि बाँच्न सफल भइन् नायिका ऐश्वर्या राय, सम्झिइन् त्यो डरलाग्दो घटना
कान्छो ग्रान्ड मास्टरको नेपाल सम्बन्ध
माहानायक बिबादमा धेरै बिरोध आएपछी यस्तो अवस्थामा पुगेकी दिपाश्री निरौलाको बहिरियो सोच्नै नसकिन तितो सत्य (भिडियो हेर्नुहोस)
अफगानिस्तानका पाँच स्थानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता
सबैले हेर्नै पर्ने जसलाई हाम्रो खोपमा विश्वास छैन, उहाँहरुले आफैँ बनाउनुहोला: रुस